Isa Roa Telo sy ny dingana vaovao hatrehiny - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Misy tsela-panentanana (spot publicitaire) mandeha amin’ny tele momba anareo Isa roa Telo alohan’ny hiresahana momba izany, teny fohy momba ny fampisehoana natao ny 21 fevrie teo tao amin’ny CGM.
Mikasika an'ilay fampisehoana tao amin'ny CGM ny 21 febroary dia tena nahafa po ny seho tamin'ny volana febroary. Fisaorana lehibe an'Andriamanitra ary fisaorana an'ireo mpankafy tonga maro be sy ianareo mpampiata vaovao. Nisy ny olana kely teny antsefatsefany ! Teo ny orana ohatra, ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ny sisa. Nizotra tsara araka ny tokony ho izy ihany anefa ny lanonana. Namaly ny fanasana ny olona. Nisy surprise be koa tamin'io fotoana io. Nisy olona manan kaja tsy ho ampoizina tonga nijery, nanome voninahitra anay, tena Faly latsaka ny ranomaso.
Nisy tolotra narosonareo ho an’ny mpankafy tamin’io. DVD live no natolotrareo azy ireo. Tafaraka ve ny nofinareo sy ny fitiavan’ny mpankafy ?
Mikasika an 'ilay DVD Live indray dia vao vita fotsiny ilay Dvd dia efa azo atao hoe tanteraka ny nofinay roa. Tanteraka ny Nofy satria izahay mihitsy no niasa mafy nanatontosan'izy io fa tsy hoe nisy ny Prod, tsy hoe niandry an'ilay izy ho vita sy nihira fotsiny izahay fa tena nisahana ny organisation rehetra. Koa tena tsy mora taminay lay izy
Ny akony hatreto dia betsaka ny miresaka aminay eto am tambazotran’ny serasera toy ny FB, eny an dalana mankasitraka an'ilay DVD. Isaorana hatrany, dia nefa izahay tsy mitsahatra foana mbola mampahafantatra an’ireo zay mbola tsy nahazo, na koa ireo zay mbola misalasala.
Efa miparitaka eto an drenivohitra ny famarotana. Ny toerana lehibe ahitana ny album dia ao amin'ny CGM... Efa misy any amin'ny faritany : Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, ary efa misy any pitan-dranomasina ao France (Paris , Orléans, Nantes)... Ezahina alefa tsikelikely hatrany dia manentana foana zahay hitsidika ny page facebook raha toa ka mila fanazavana bebe kokoa ny Points de vente.
Raha hiverenana kosa ilay spot publicitaire. Inona no azo hambara ?
Mikasika ny hetsika manaraka dia mbola ho tohin'ny promotion an'ilay Album Nofintsika (amin’ny vidiny promotion araka ny tanjon’ny hetsika). Mbola vonona hatrany hizara ilay kanto, hampahafantatra ny Rn'b Soul ilay mozika vohizin'ny Isa Roa Telo.
Misy hetsika fanindroany ao amin'ny Paprika Akorondrano ny Alakamisy 30 aprily 2015 amin'ny 8 ora sy sasany alina izay io.
Izy io dia iavaka satria ankoatra ny promotion an’ilay album dia hisy interprétation vahiny ho atao "standard " sy Soul ihany ko.
Fa amin'ny maha andro iraisam pirenenan’ny Jazz dia hilalao an’izay ihany koa ry zareo mpitendry : Joel rabesolo ny guitare / Tabiha Mahatozo clavier / Hasina Rakotoarimalala ( Basse&sax)/ Zo Tantely ( Clavier 2) / Lova Bil Rakotomalala ( Batterie)
Ary amin'ny farany dia hisy discothèque iarahana amin'ny Mox Dj
Raha toa ka tsy afaka nijery tamin ilay tao amin'ny CGM dia fotoana io handehanana. Manentana ihany koa an'ireo mpankafy tia milanona miaraka amin'ny namana, io no andro mety satria tsy fiasana ny ampitso dia afaka manararaotra tsara. Tongava maro fa vonona zahay hanome ny tsara ary hanome fahafaham-po. Ny tanjon'ny Isa Roa Telo dia ny anao mozika mipetraka sy hivelatra ambony kokoa hatrany. Raha ho an'ny olona any am-pita dia te hampahafantatra ny malagasy sy ny vahiny izahay hoe misy Malagasy manao ny gadona international Rn'b soul aty Madagasikara. Ary vonona ny hiara hiasa amin'ny olona matihanina hatrany zahay raha misy ny manana fikasana.
Manentana hatrany ny mpankafy hitsika ny page FB ISA ROA TELO /, Google +( Isa Roa telo group) ary /twitter ( Liantsoa Isa Roa Telo) hilazana ny vaovao sy hifaneraserana amin'ny mpankafy .
Ny ao aorian'ny 30 aprily ?
Ny volana mai dia hisy lalao ho karakarainay ato amin'ny facebook. Lalao fanontaniana ary ny valiny dia ao anaty album. Hisy ny fifaninanana sary "selfie" miaraka amin'ny Album koa izay be "j’aime" no hahazo loka. Hisy loka ihany koa omenay an'izay tsara vintana.
Misaotra anao sy ny Ekipa rehetra manohana anay hatrany. Mankasitraka feno.